कृष्ण र रुपाको छोरासँग खेल्दै गरेको यस्तो भिडियो भाईरल, एकैछिनमा लाखौंले हेरे (भिडियो सहित) – Classic Khabar
यो पनि हेर्नुहोस् – डा. सबिना सिम्खडाले बात्सल्या आईभिएफ फर्टिलिटी सेन्टर खोलेको करिब तीन बर्ष भयो । तीन बर्षमा हजारौं निःसन्तानको पीडा खेपेका महिलाहरुलाई आमा बन्न सहयोग गरेकी छन् । निःस’न्तान’पन भएर उपचारको लागी नेपाल बाहिर जानेहरुलाई नेपालमै उपचार संभव छ भनेर देखाएकी छन् । पछिल्लो समय निःसन्तानपन (बाँ’झोप’ना)को बारेमा जनचेतना फैलाउँदै त्यसबाट जोगिन समेत डा. सिम्खडा आग्रह गर्छिन् ।
पहिले नेपालका बिरामीहरु भारत जान्थे तर अहिले भारतबाट बा’झोप’नाको उपचार गर्न नेपाल आउने गरेको डा. सबिनाको अनुभव छ । उनको क्लिनिकमा पनि धेरै भारतीयहरु आएर सेवा लिएका छन् । हामीले उनी प्रजनन् बिशेषज्ञ डा. सबिना सिम्खडासंग बाँ’झोप’ना र प्रजननको बिषयमा कुराकानी गरेका छौं ।
Prevछोरी बिग्रे नर्स भन्ने समाजलाई महामारीमा देवीको रुपमा प्रकट भए नर्सहरु